‘मै हूँ हजुर तिम्री तरुनी’ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← जुत्ता सिलाएर मासिक ५० हजार आम्दानी
आदिवासी भिलेज निर्माण हुँदै । →
लोकगायिका कोमल वलीलाई सबैभन्दा बढि पछ्याउने प्रश्न हो, कहिले हुन्छ विहे ? हामीले यही प्रश्नलाई फरक ढंगले सोध्यौं, बिहे त नगर्ने नै हुनु भो क्यारे ? प्रश्न सुन्नासाथ कोमल वलीले कोमल मन देखाइनन्, कडा बनिन र भनिन्, दश थरीको हुन्छ बिबाह, हामीले बुझेको विवाह त एउटै हो, कोमलले बुझेको विवाह दश थरीको हुन्छ, हामीले हँमा हँ मिलायौं, उनले थप जवाफ फर्काइन, संयोग मिलेको दिन हुन्छ विहे । त्यसो त कोमलले फोटोशेसन गरेर दुलही बन्ने प्रयास गरिन, लोकगीतबाट झ्वाँक तन्नेरी खोजिन, लाखौं युवाले आफू झँवाक तन्नेरी बनेको सन्देश कोमलको गीत सुनेर दिए, एक जनाले गीतबाटै जवाफ फर्काए ‘म छु नी झ्ँवाक तन्नेरी’ भनेर । कोमलको चित्त बुझेन क्यार, त्यसैले त भगवान शिवजीसँग पोइला जान पाम् भन्दै गुहार लगाएकी कोमलले शिवजीलाई गाली गरिन । दाङ टिकरीमा जन्मिएकी कोमलको जन्म वैशाख १ गते भएको थियो । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर यीनै कोमलसँग हामीले अरु पनि थुप्रै प्रश्न सोधेका थियौं जसको जवाफ उनले यसरी दिइन् ।
-वाल्यकाल कसरी बित्यो ?
मेरो वाल्यकाल उटपट्याङ, चटपट्याङ, गीत गाउने, रमाईलो गर्ने, खेल्ने, दौडने गरि वित्यो । जसलाई समग्रमा नराम्रा बच्चाले गर्ने काम कोमल वलीले गरि भन्दा केही फरक पर्दैन । मन नपरेका साथीहरूलाई बाटामै छेकी स्कुल जान नदिने । अरूले ल्याएका खाजा खाईदिने । उनीहरूसँग पैसा भए त्यो पनि लिएर पिपल मेठ किनेर खाइदिने काम गरियो ।
-अनि तन्नेरी समय कसरी बित्यो ?
मेरो जीवनको सबैभन्दा व्यस्त समय नै यही थियो । जुन वेला जीवन एकदमै रसिलो पनि थियो । सात कक्षा पढ्ने वेलादेखि म व्यस्त हुन थालेको हूँ । म खेलाडी पनि हूँ । मैले भलिबल र एथलेटिक्स पनि प्रतियोगी भई पुरस्कार जितेको छु । जसले गर्दा म दाङमा पपुलर भै सकेको थिएँ । जुन वेलामा मैले थुप्रै थाल, कचौरा, मेडलहरू जितेको थिएँ । ती पुरस्कारहरू वाक्साभरी हुन्थे । २०४१ सालमा लोकदोहोरी प्रतियोगितामा गोल्ड मेडल जितको थिएँ । २०४४ सालमा मेरो पहिलो एल्वम राप्तीको झरना निकालेको थिएँ । महेन्द्रबहुमुखी क्याम्पस पढ्दा म त्यहाँ पनि कक्षाको क्याप्टेन भएँ । अनि त्यही समयमा साफ गेममा भाग लिन गएँ । मेरो आमाको इच्छा मैले खेल क्षेत्र छोडोस भन्ने थियो । मेरो बुबा चाहीँ गाउँमा एउटा स्कुल खोलेर चलाउनु पर्छ भन्ने चाहना राख्नु हुन्थ्यो । मैले आफैँले पढेको प्रथामिक विद्यालयमा ६ महिना पढाएँ । एसएलसी, आईए र विए सजिलै पास गरेँ, व्याकबेञ्चर मैले कहिल्यै कहिल्यैँ फस्ट, सेकेन्ड, र थडसम्म पनि भइन । तर गीत गाएर फस्ट भएँ, सबैको लागि चर्चा योग्य भएँ ।
-गायनको सुरूवात कहिलेदेखि भयो ?
मेरो गायनको सुरुवात नथापाउने पाराले भयो । मैले व्यवसायिक रुपमा गीत गाउन थालेको २०४४ साल फागुन ७ देखि हो ।
-गायनबाट के पाउनु भो ? के गमाउनु भो ?
धेरै पाएँ । पहिलो कोमल वली भन्ने नाम पाएँ । दर्शक र श्रोताहरूको माया पाएँ, ताली पाएँ, प्रशंसा पाएँ अनि गाली पनि । गुमाएको भनेको समय हो । मैले समय भने यसैका कारण चाहीँ साच्चिकै गुमाएँ ।
–तपाई त समाचारवाचिका पनि, पढ्न सजिलो कि गीत गाउन ?
गीत गाउन सजिलो छ । समाचार पढ्न बाहिर देखेजस्तो सजिलो छैन नि । समाचारमा ‘नगर्न पर्ने भन्ने ठाउँमा गर्न पर्ने’ भयो भने, त्यसले ठूलो व्लन्डर निम्त्याउँछ र नराम्रो सन्देश जान्छ । म त जहिले पनि समाचार पढेर आइसकेपछि लामो सास फेर्छु । त्यसैले गीत गाउँदा अलि तनाव त हुन्छ तर राम्रै लाग्छ ।
-हालसम्म कतिवटा कन्सर्टमा गाउनु भो ? र के पाउनु भो ?
मलाई लाग्छ १५० जति कन्सर्टमा भाग लिएको छु । झन्डै पच्चिस बढी राष्ट्रमा गाएको छु । अनि एउटै देशमा ६ पटकसम्म पनि गाएको छु । मरो उपलब्धि भनेकै कन्सर्ट हो । कन्सर्टमा भागलिन पाउने कलाकार भाग्यमानि हो । मैले गीत गाउँदै गर्दा दर्शक पनि सँगै गाउँने र नाच्ने गर्छन । पैसा, तालि र सिठ्ठी पाइन्छ ।
-कन्सर्टका लागि कति जिल्ला र देशहरू घुम्नु भो ?
६२ जिल्ला र २५ देश घुमेको छु ।
-कुन गीत गाउन मज्जा आउँछ ?
कालो टोपी कालै छ कोट नबोले नि हाँसी देऊ के भोत…. -सुरीलो स्वरमा गीत नै सुनाईन) । विधागत रूपमा लोक र दोहोरी गीत गाउन मजा आउँछ ।
-कति गीत गाउनु भो ?
पाँच सय गीत गाईसकेँ । आफूले लेखेर आफैँले गाएको एक सय छन् ।
-हालसम्मकै सबैभन्दा बढी मन परेको गीत ?
पोईल जान पाम् शिव पाईल जान पाम्
-कतिवटा एल्वम निकाल्नु भो ?
११ वटा एल्बम निकाले । पछिल्लो एल्बम बद्मास हो ।
-तपाईको गीतहरूमा अलीबढी रस हुनुको कारण के छ ?
मेरो गीतमा सौन्दर्य रस हुनु स्वभाविक हो । गीतसङ्गीतमा जीवित बन्नका लागि फरक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । तर कतिले नराम्रो दृष्टिकोणले पनि हेरेको देखेको छु । हरेक क्षेत्रमा दुःख पाइरहेका नेपालीले मेरो गीत सुन्नेबेला मुखै बन्द नगरेर, कानै नहल्लाएर सुनुन भन्ने चाहन्छु । आहा भनेर एकछिन भने पनि दर्शक र श्रोताहरुले मज्जा लिउन भन्ने हो ।
-बेला बेलामा विवादमा पनि तानिनु हुन्छ नि ?
म विवदामा तानिनु भनेको गीतकै कारण हो । जस्तो ‘धेत्तेरिका शिव जी रै छौ बदमास….., गीतमा बदमास रैछो भगवान भनेर भनेको हो । हामीले भगवानसँग सबै कुरा मागेेका हुन्छौ र नपाएपछि धिक्कार भन्छौँ र गाली गर्छौ । त्यसकारण हामीसँग भगवानलाई जे पनि गर्ने अधिकार छ । म प्रतिको पूर्वाग्रहको कारण मलाई विवादमा ल्याईएको हो । यसमा म्युजिक कम्पनीको पनि खेल छ ।
-तपाई त राजनीतिमा लाग्ने रे भन्ने हल्ला छ त ?
म भविष्यमा यो देशको मन्त्री हूँ । संबिधान बनेर चुनाव भए म चुनाव लड्छु । त्यसबेला देशको कुनै पनि ठाउँबाट म चुनाव लड्न सक्छु । म सरसल्लाह गर्छु जुन ठाउँमा मेरो डिमान्ड हुन्छ त्यही गएर चुनाव लड्छु । राजनीतिक दलहरुसँग पनि मेरो कुरा भइरहेको छ । तर निर्णयमा पुगिसकेको छैन । म अहिले सभासद् भएको भए । उपचार नपाएर मर्ने कालाकाका लगि उपचार गर्ने कुरा संविधानमै लोखाउन पहल गर्ने थिएँ । र उपचार नपाई मर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने थिएँ । हामी कलाकारहरु अब राजनीतिक दलरुको सदस्य बनेर चुनाव लड्ने भन्दा आफैँ दल दर्ता गरेर लड्ने कुरा गरिरहेका छौँ ।
तपाईको नयाँ के आउँदै छ ?
मेरो झकास नामको एउटा एल्बम आउँदै छ । दर्शक श्रोताहरुले प्रतिक्षा गर्नुहोला । ‘मै हूँ हजुर तिम्री तरुनी’ । सबै काम सकिएको छ । रिलिज हुन मात्र बाँकी छ ।
-तपाईको पहिलो प्रेम ?
प्रमे पनि पहिलो र दोस्रो हुन्छ र ? प्रेम त एउटै मात्र हुन्छ ।
-जीवनमा कतिवटा प्रेम प्रस्तावहरू आए ? कसरी स्वीकार वा अस्वीकार गर्नु भो ?
प्रेम प्रस्तावहरु आउने जाने गर्छन तर यति उती भन्ने चाहीँ मलाई याद छैन ।
-तपाईले देखेको झ्वाँक तन्नेरी को हो ।
धेरै छन् झ्वाँक तन्नेरीहरू । एउटालाई मात्र के । अनि अर्को कुरा सबै झ्वाँक तन्नेरीहरू भेटाउँदैमा आˆनो बनाइहाल्नु पर्छ भन्ने होईन । राम्रो चिज भनेको त टाढै बसेर हेर्न पो मजा आउँछ त ।
-तुल्सीपुरमा गजवको तन्नेरी भेटउँदा पनि किन अहिलेसम्म एक्लै ?
त्यो मान्छेसँग दोस्रो पटक भेटै भएन । सायद, कोमल वली भन्ने चिनेर ऊ रेडियो नेपालमा भेट्न आएको भए……… ।
-बिहे त नगर्ने नै हुनु भो क्यारे ?
क्यारे किन हो र ? बिहे गर्नलाई उमेरले छेक्छ र के उद्देश्यले बिहे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ । कुन उद्देश्यले विहे गर्ने हो ? भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । दश थरीको हुन्छ बिबाहको प्रकृति । त्यसकारण बिहे नगर्ने हुनु भो क्यारेमा छैन । संयोग मिलेको दिन बिहे गरिन्छ ।
Posted By: Dambar Prasad Rimal Source: onlinekhabar